Soo helida Buluuga Yeti | Martech Zone
Soo helida buluuga Yeti
Isniin, November 22, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
The Martech Zone radio show wuxuu watay dhagaystayaal badan (in ka badan 1,500!) Waana mid caan ka noqonaya toddobaad kasta. Caan ahaanta sidoo kale waxay la timid cambaareyn… iyo Dave Woodson, Podcaster xilliyeed, wuxuu na siiyay (si fiican u qalmay) waqti adag oo ku saabsan tayada podcast-keena. Waxaan adeegsanay a Mikrofoonka USB ee Barafka Barafka leh xafiiskayaga - taas oo aan ku habboonayn acoustics gabi ahaanba.
Natiijadu waxay noqotay in makarafoonka la soo qaado wixii qasabado ah oo miiska saaran, cabaadka qaboojiyahayaga, iyo tayada daasadda-daasadda. Qolka xasilloon oo ay ku jiraan walxaha nuugaya, makarafoonkaas wax weyn buu qabtaa. Gaar ahaan maadaama ay tahay mid la qaadan karo isla markaana si sax ah ugu dhex dhici karto boorsadaada. Sannad safar ah kadib, shaashadayda ayaa soo baxday oo waxay u baahan tahay xoogaa xabag ah si aan dib ugu soo lifaaqo. Waqtiga makarafoonka cusub!
Dave wuxuu kugula taliyay Blue's Yeti Makarafoonka USB markaa waxaan amar ku siineynaa isla markiiba maadaama ay ahayd mid la awoodi karo… wax ka yar $ 100. Waxay timid kahor barnaamijkeenii ugu dambeeyay ee raadiyaha oo falanqeynaya Muuqaalka cusub ee iimaylka ee Facebook oo ay la socdaan qaar ka mid ah xirfadlayaasha warshadaha.
Wow, waa bahal! Makarafoonku si fiican ayuu u shaqeeyay, tayada bandhiguna xoogaa wey soo hagaagtay. Weli waxaan aaminsanahay inaan caqabado kala kulanno miisaska biraha iyo qolka echo-ka waxaan ku qabaneynaa bandhigga… laakiin waan sii wadaynaa inaan sii wanaajinno waqti ka dib. Aad baad ugu mahadsantahay Dave talo bixinta.
Makarafoonku wuxuu leeyahay 4 qaab oo hawlgal ah oo kuxiran dhagaystayaashaada. Waxay leedahay goobo badan, iyadoo kuxiran goobta codka aad iskudayeyso inaad sooqaadato - stereo, cardiod, omnidirectional, and bidirectional. Waa tan sharaxaad ku saabsan Dejinta Yeti iyo codsiyada ka imanaya barta Blue:
Waan sii wadi doonnaa ka shaqeynta xafiiska si loo hagaajiyo acoustics, laakiin shaki iigama jiro in aan helnay mikrofoon sax ah. Tani waa qayb weyn oo qalab ah oo qiimo leh!
Tags: Suuqgeynta Suuqgeyntamakarafoonka
Blogging Corporate: Heesta Rap